သတင်းများ – LVBANG
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမျာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြု ကိရိယာတွေ သုံးစွဲနှုန်းဟာ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းကြော်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ တင်ပို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း ပိုမို ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိပါသည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စျေးကွက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၀ မှ ၇- ရာနိုင်နှုန်းအထိရှိပါသည်။
တရုန်တိုင်ငံ၏ Power Tools Branch of the Electrical Equipment Industry Association အရ ကမ္ဘပေါ်တွင် အသုံးပြုနေသော Power Tools ၏ ၈၅ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ တင်ပို့မှု၏ ၄၀ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးသည် ကမ္ဘာတစ်၀န်းလုံးမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ တင်ပို့မှုဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမှာ သန်းပေါင်း ၂၃၀ ကျော်ရှိပါပြီး တစ်နှစ်လျင် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး နယ်ပယ်ကို ခြုံငုံကြည့်မည်ဆိုပါက တရုတ်နိုင်ငံသည် နည်းပညာအသစ်များဖြစ် တဟုတ်ထိုး တိုးတက်လျက်ရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များ၊ အခွင့်အရေးများစွာဖြင့် Power Tool များဟာ အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း အလားလာ အလွန်ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းအဖြစ် တည်ရှိနေမည်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာ 17, 2019
Super good work tools, I want you to worry about what you are worried about.
How much does it cost to openapower tool store?
How much profit does it sell to power tools? Is it good to use regular electric tools